Gaadiid Dekedda Berbera Ka Qaaday Raashinka WFP Oo Ku Xaniban Magaalada Jig-Jiga Iyo Sababta – somalilandtoday.com
Gaadiid Dekedda Berbera Ka Qaaday Raashinka WFP Oo Ku Xaniban Magaalada Jig-Jiga Iyo Sababta
(SLT-Hargeysa)-Gaadiid tiro badan oo Dekedda Berbera ka qaaday Raashinka Mucaawimada ah ee Hay’ada WFP, ayaa muddo todobaad ah ku xaniban Magaalada Jigjiga halkaasoo ay u wadeen raashinkaa, kaddibna markii ay geeyeen laga rogi waayey wakhti ka badan lix maalmood.
Qaar kamida Gaadiidleyda ayaa sheegay inaan wali laga dejin Raashinka, sababtana waxay ku tilmaameen xarumihii lagu rogi lahaa raashinka oo buuxa, iyadoo taasina caqabad dhanka shaqada ah ku keentay.
“Baabuurta qaarkood 6 Casho ayey raran yihiin oo wali aan laga dejin, waxaana lagu jiraa wakhtigii Xoolaha la soo rarayey, markaa dhibaato weyn ayaa naga haysata”sidaas waxa Warbaahinta u sheegay mid kamida gaadiidlayda Baabuurtu ka xaniban tahay.
Waxa uu intaa ku daray “Dawladdu ilaa iminka wax talaabo ah may qaadin, maanta ayaanu doonaynaa inaan cabasho u gudbino Wasiirka Gaadiidka ee Dawlad deegaanka” ayuu raaciyey. “Baabuurtii Jabuuti ka soo qaaday Raashinka qaarbaa laba jeer noqday intii aanu joognay”.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka Dawladda oo la xidhiidha cabashada gaadiidlaydan, hase ahaatee warku wuxuu intaa ku daray in bakhaarada lagu rogo raashinkaasi ay buuxsameen, isla markaana ay wali socoto daabul lagu banaynayaa.
Gaadiidka xaniban ee raashinka siday ayaa badankooda waxa laga leeyahay Somaliland, waxaanay sida caadiga ah markay soo laabtaan soo qaadaan Xoollo nool oo laga dhoofiyo Dekedda Berbera.